INokia Lumia 830: Ukubuyekezwa Nokuhlaziywa Kwevidiyo | Izindaba zamagajethi
INokia Lumia 830: Ukubuyekezwa Nokuhlaziywa Kwevidiyo
UPablo Ortega | | AmaSelula, Izibuyekezo, I-Telephony
INokia Lumia 830 ingenye yezingcingo zakamuva ezivela kwaMicrosoft ezizokhombisa uphawu lweNokia. Kusukela manje kuqhubeke, okwedlule kweFinland kuzophulwa futhi kuzosetshenziswa isiginesha ye- "Lumia" kuphela. Sibhekene ne-terminal engadumazi. Kuyindlela ye- ibanga eliphakathi nokusebenza okuphezulu, enakekela abathengi abakhathalelayo ngezinkinga ezifana nempilo yebhethri nekhwalithi yezithombe.
Ngokwengeziwe, iMicrosoft isimema ukuthi sisebenzise i- I-Nokia Lumia 830 njengomngane ofanele uma kukhulunywa ngokuzivocavoca umzimba. Idivayisi ihlanganiswe ngokuphelele nesongo lokulinganisa UFitbit nomsizi wezwi uCortana, lokho kuzosisiza osukwini lwethu nosuku. Sihlaziya i- INokia Lumia 830.
3 Ukucaciswa kobuchwepheshe
4 Ikhamera yeNokia Lumia 830
5 I-Windows Phone neCortana
6 Amanani nokutholakala
Le modeli ilandela isitayela nokwakheka kwawo wonke amanye amafoni Ibanga eliphakathi neNokia Lumia. Sithola idivayisi engunxande namaphethelo ayindilinga. Ingemuva ipulasitiki, kepha ukuphela kwayo kukhulu, ngakho-ke ngeke kuze kwaziswe ukuthi yipulasitiki elula. Lesi siphetho sikwazi ukudlulisa umuzwa wobugagu. Futhi ukuqhubeka nokusiza ukwakha lo muzwa, iNokia ifake i-metallic trim. Idizayini uqobo ishiya ukunambitheka okuhle emlonyeni wakho, ikakhulukazi uma wazi ukuthi ungakuhlanganisa kanjani kahle.
Ngemuva kwe- INokia Lumia 830 iyashintshana. Ephaketheni lethu, ifoni ibifake ikesi emnyama, engashintshwa ngamanye ama-shades, afana nomhlophe no-orange; kodwa umzimba omnyama yiwona oyifanela kahle le Nokia Lumia.
Ucingo lunobukhulu obungu-139,4 x 70,7 x 8,5 mm nesisindo esingu-150 grams. Lo ngumnyango iMicrosoft engakaze iwunakekele: inkampani incamela ukwenza izingcingo ezinkulu, kepha inikele nge isikhathi sebhethri esiphezulu.
Njengoba besilindele, i- INokia Lumia 830 ayikude kakhulu ngemininingwane yezobuchwepheshe, yize kuyifoni engabizi kangako yamaphakethe ethu.
Siqala ngokukhuluma ngobubi: isikrini, Ama-intshi ama-5, akezi ukuzonikeza isisombululo se-HD ephelele ngo-1080p: ihlala ngamaphikseli angama-720. Okuhle ngalokhu ukuthi ibhethri lethu lizohlala isikhathi eside, ngakho-ke ngeke libe yinkinga kwabanye. Okunye okuphambene nomthetho yi iprosesa, i-Snapdragon 400 ebhalwe ngandlela thile, kepha ekusebenziseni kwethu ifoni asizibonanga izinkinga nge-processor. Ifoni ihlomisa i-1GB yememori ye-RAM.
Amaphuzu okuhle: ibhethri le-2.200 mAh, isitoreji sayo esingu-16GB nesifundi sekhadi le-MicroSD ukulikhulisa laya ku-128GB futhi, kungaba kanjani ngenye indlela, ikhamera yalo.
Ikhamera yeNokia Lumia 830
IMicrosoft ayidumazi emnyangweni wekhamera. Le divayisi iyakwazi ukuthatha izithombe ezinokulungiswa okuphezulu, yize zisezingeni eliphansi, ngenxa yayo Ilensi elingu-10 megapixel kanye nokufakwa kobuchwepheshe bePureView. Ku-interface yefoni sizothola wonke amathuluzi wezici zamakhamera we-Microsoft azosisiza ukulawula ngisho nemininingwane emincane kakhulu yezithombe. Le foni iyakwazi ukuqopha ividiyo ngekhwalithi ye-4K futhi ifaka izinketho ezinjengeLumia Cinematograph application.
Ikhamera engemuva ihlanganisa isiqinisi sesithombe ne- Zeiss yokukhanya.
I-Windows Phone neCortana
INokia Lumia 830 ihlangana, ngokuzenzakalela, I-Windows Phone 8.1; uhlelo lwezemvelo olunembile olusebenzisa kakhulu umqondo wamathayili abukhoma noma izinhlelo zokusebenza ezinezithonjana ezisivumela ukuba sazi izaziso ngokushesha. Isistimu yokusebenza abanye abayithandayo, kepha abanye abayithandi ngenxa yobulula bayo ezigabeni ezithile. Ngaphezu kwalokho, isitolo sohlelo lokusebenza seWindows asinayo ikhathalogi ebanzi, ngoba onjiniyela bakhetha ukukhetha amanye amapulatifomu amabili lapho bangenisa khona imali ethe xaxa: i-Android ne-iOS.
Kepha esinye sezingxenye ezikhanga kakhulu sohlelo lwe-Lumia ecosystem ukuthi the umsizi womuntu uCortana manje iyahambisana ngokuphelele nesongo lesisindo seFitbit. Ngokukhuluma, uCortana noFitbit bazokwazi ukuqoqa idatha yalokho okudlile namuhla, isibonelo, noma umsebenzi owenzile owenzile.
El I-Nokia Lumia 830 Isivele itholakala eSpain ngama-419 euros. E-United States ungayithenga nge-opharetha ye-AT & T ngo- $ 99,99.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » INokia Lumia 830: Ukubuyekezwa Nokuhlaziywa Kwevidiyo
Ungayilondoloza kanjani iWindows lapho ingeke iqale kabusha